Ationgbọ njem na United States | Njem zuru oke
United States bụ mba buru ibu jikọtara nke ọma n'ime ụgbọ njem dị iche iche dịka ụgbọ oloko, ụgbọ elu, ụgbọ ala na bọs.
Uzo njem nke US buru oru nke oma n’ile ya ma nye gi ohere ighari iru obodo a ezi nkasi obi na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem njem na United States ma chọọ ịma otu ị ga-esi site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri, echefula isiokwu a ebe anyị na-akọwa kedu ihe eji eme njem na United States.
1.1 Kedu mgbe iji ụgbọ elu na United States?
1.2 Gbọ elu ị nwere ike iso njem
2.1 Kedu ihe ọ na-ewe iji ụgbọala na United States?
2.2 Kedu ihe ị kwesịrị ịma iji anya ụgbọala na United States?
3 Transportationgbọ njem ọha na United States
3.2 Kedu ka ụgbọ oloko dị na United States?
3.3 Kedu njem ị ga-eme n'ụgbọ okporo ígwè na United States?
3.5 Kedu ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị bụ isi?
Planegbọ elu ahụ bụ ụzọ njem kachasị dị mfe iji gafee obodo site na otu steeti gaa na nke ọzọ ebe ọ bụ na netwọk ụgbọ elu mba dị ọtụtụ ma nwee ntụkwasị obi na ọtụtụ puku ụgbọ elu kwa ụbọchị, ọtụtụ ụgbọ elu na ọtụtụ narị ọdụ ụgbọelu. Ọtụtụ isi obodo nwere ọ dịkarịa ala otu ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu na njikọ dị.
Obodo a buru oke ibu ma oburu n’otu ebe ichoro igha site n’otu osimiri rue osimiri gaa n’oge nke kachasi nso, o kacha mma iji ugbo elu dika njem ahu gha ewe gi erughị awa isii ma e jiri ya tụnyere njem nke otutu ubochi. eji ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala eme njem.
Kedu mgbe iji ụgbọ elu na United States?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịchekwa ego na tiketi ụgbọelu gị, ihe kachasị mma ime bụ ịhazi atụmatụ njem gị tupu oge eruo. N’oge gara aga, ụgbọ elu gbalịrị iwepụ oche ndị karịrị akarị n’oge ikpeazụ, yabụ ị ga-eche ogologo oge iji nweta tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala. Agbanyeghị, taa ọnọdụ agbanweela ma enwere ụgbọ elu na-enyekarị ndị njem ọnụahịa ka mma.
N'oge ụfọdụ dị ka oge opupu ihe ubi, oge ọkọchị ma ọ bụ mgbede nke ezumike na ezumike akụ, ichere ruo ụbọchị ikpeazụ iji nweta tiketi ụgbọ elu nwere ike ịdị oke ọnụ n'ihi na ọ bụ oge dị elu ma njem ụgbọ elu na United States dị oke ọnụ. Ọ bụrụ n’inwere ohere ị ga-aga mba Amerika n’obere oge, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya n’ihi na tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala. Otú ahụ ka ọ dị ma a bịa n’ụbọchị izu ụka kama ịgawa ná ngwụsị izu. N'ụzọ dị otú a, ị ga-echekwa ego karịa.
Gbọ elu ị nwere ike iso njem
Fọdụ ụgbọ elu mba na-arụ ọrụ na United States bụ: American Airlines, Delta Air, United Airlines, US Airways, Skywest Airlines, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines ma ọ bụ Virgin America, na ndị ọzọ.
Steeti niile nke obodo a nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọdụ ụgbọ elu na-efega obodo dị iche iche kwa ụbọchị. N’ezie, United States nwere ọdụ ụgbọelu dị n’ụlọ dị 375.
Mgbe ị na-ejegharị na United States na ezumike, ọtụtụ ndị njem na-ahọrọ ụgbọ ala n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ezigbo njem. Ma nke ahụ bụ otu n'ime ndị kasị ama okporo ụzọ njegharị na mba ahụ bụ Nsoro 66 makwaara dị ka "isi n'okporo ámá dị na United States."
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 4.000 n'ogologo, utezọ 66 gafere mba ahụ site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ site na steeti asatọ (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona na California) site na Chicago wee kwụsị na Los Angeles. Me ụzọ ahụ ụgbọ ala ma ọ bụ ọgba tum tum bụ njem nrọ maka ọtụtụ ndị. Otú ọ dị, Gbagharị ụgbọ ala na United States ị ga-amarịrị ka ị ga-esi ebe ahụ n'ihi na iwu ya nwere ike ịdị iche na nke obodo gị.
Kedu ihe ọ na-ewe iji ụgbọala na United States?
Ọ bụrụ n’ịjegharị dị ka ndị njem nleta, n’ọtụtụ steeti ị ga-achọ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ofesi. Ikekwe mgbe ị gara ịgbazite ụgbọ ala ha agaghị arịọ ya mana ịnara ya anaghị ewute gị n'ihi na ọ dị mfe ịnweta.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Spain iji nweta ya, ị ga-enwerịrị ikikere ịnya ụgbọ ala ziri ezi ma enwere ike ịme usoro ahụ ngwa ngwa n'ịntanetị. Ihe niile ị chọrọ bụ DNI eletrọniki, dejupụta mpempe akwụkwọ iji rịọ ikike ma kwụọ ụgwọ ndị ahụ. Twobọchị abụọ ka nke a gasịrị, ịnwere ike iburu ya na ụlọ ọrụ ọ bụla na-eweta ID gị iji mata onwe gị na foto agba agba ugbu a nke 32 x 26 mm. Ozugbo enyere gị, ikikere ịnya ụgbọ ala mba ụwa nwere oge bara uru nke otu afọ.
Cheta na ịgbazite ụgbọ ala na United States obere afọ achọrọ bụ afọ 21, ọ bụ ezie na ụfọdụ steeti ọ nwere ike ịbụ afọ 25.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma iji anya ụgbọala na United States?
N'agbanyeghị ịbụ obodo nwere ọdịnala Anglo-Saxon, na United States ị na-anya ụgbọala n'aka nri, otu ụzọ ahụ dị ka n'ọtụtụ mba Europe na Spain. Agbanyeghị, anyị ga-eburu n'uche na steeti ọ bụla nwere ike ịnwe iwu dị iche iche gbasara okporo ụzọ. Yabụ, Tupu ịmalite ịkwọ ụgbọala, ị kwesịrị ịchọpụta maka akara ngosi ụzọ na oke ọsọ na steeti ị na-aga ileta.
N'aka nke ọzọ, United States bụ mba nwere nnukwu mpaghara nke obere ala mmadụ bi ebe anụ ọhịa na-achị, nke mere na ọ bụrụ na ịmaghị ala ahụ, ọ dịịrị gị mfe ị furu efu. Iji zere nke a, ọ bụrụ na ị ga-agbazite ụgbọ ala na United States, gbaa mbọ hụ na ị wetara GPS nke melite map okporo ụzọ.
Transportationgbọ njem ọha na United States
Ọzọ ọzọ iji nweta gburugburu United States bụ ụgbọ oloko. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịnwe oge dị ukwuu iji gaa, ọ bụrụ na ịnweghị ikikere ịnya ụgbọ ala mba ụwa ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọghị ime ka ndụ GPS na ndụ gị sie ike mgbe ị na-agbazite ụgbọ ala. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụrụ na ịhọrọ ụgbọ oloko ịgafe na United States, uru bụ na ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịdị ala dị egwu (nnukwu ala ahịhịa juru, ugwu ndị dị elu na obodo mara mma) mgbe ị na-agagharị na nkasi obi.
Na United States, onye na-enye ọrụ a bụ Amtrak, onye na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè na-ejikọ North America site na usoro ya nke karịrị ụzọ 30 nke ụgbọ oloko ha na-aga karịa ebe 500 na 46 steeti na Washington DC
N'ihi njikọ dịgasị iche n'etiti isi obodo ndị dị na United States, ọ bụrụ na ị kpebie ịga ụgbọ oloko ị nwere ike ịga ụgbọ oloko iji gaa New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Washington DC, Los Angeles na San Francisco. Obodo ndị ọzọ dị na mba ahụ nwere ike ịnwe obere ụzọ ụgbọ okporo ụzọ abụọ ma ọ bụ ụzọ abụọ maka ịgbagharị gburugburu etiti.
Ọzọkwa, ọtụtụ obodo dị na mba ahụ nwere usoro ụgbọ oloko ndị mepere emepe nke na-enyekarị njikọ na ọdụ ụgbọ oloko mpaghara ma na-agba n'etiti obodo na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ.
Kedu ka ụgbọ oloko dị na United States?
Imirikiti ụgbọ oloko Amtrak nwere oche sara mbara sara mbara iji gbatịa ụkwụ gị wee zuo ike, yana Wi-Fi, ụlọ mposi na nri. n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, maka njem ndị ahụ dị ezigbo anya, e nwere ụgbọ ala ndị nwere ngalaba ihi ụra.
Kedu njem ị ga-eme n'ụgbọ okporo ígwè na United States?
N'ime ụzọ ndị Amtrak na-enye ndị njem, e nwere ụzọ abụọ, n'ihi ọdịiche ha, ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịme: ụgbọ oloko California Zephyr (nke na-agbaso ụzọ nke ndị na-achọ ọla edo mere n'ebe ọdịda anyanwụ site na steeti 7 nke ọdịdị mara mma) ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè Vermonter (iji hụ ọdịdị mara mma nke New England, obodo ya ndị mere eme na chọọchị ya na steepụ ọcha).
Otu n'ime ụgbọ njem ndị kachasị na United States iji kwaga mba ahụ bụ bọs. Ihe kpatara ịhọrọ ya dị ọtụtụ: ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-enye ọrụ ahụ na ọnụahịa maka mmefu ego niile, njikọ dị mma n'etiti ọtụtụ obodo na ụgbọ ala dị ọcha, nke dị mma ma dị mma.
Imirikiti obodo ukwu nwere netwọọdụ ụgbọ ala a tụkwasịrị obi, ọ bụ ezie na ọrụ na ngwụsị izu na n'abalị pere mpe.
Ọ bụrụ na oge abụghị nsogbu, bọs nwere ike ịbụ ụzọ na-adọrọ mmasị iji chọpụta mba ahụ ka ọ na-enye gị ohere ịhụ ebe kachasị dịpụrụ adịpụ na mbara ala dị iche iche nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ị ji ụgbọelu mee ya.
Kedu ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị bụ isi?
Greyhound: ọ bụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị ogologo dị ogologo nke na-ekpuchi ụzọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ahụ dum na Canada.
Boltbus: na-arụ ọrụ na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ (ọtụtụ New England na steeti New York n'etiti ebe ndị ọzọ).
Megabus: ụlọ ọrụ a na-ejikọ ihe karịrị obodo 50 ma nwee ụzọ gasị Canada. Ọ nwere nnọọ asọmpi ahịa.
Vamoose: otu n'ime ndị njem na-aga n'etiti Washington na New York na-ejikarị.
Obughi uzo eji eme njem ka ogha n’etiti obodo ma n’otu obodo. Obodo ukwu niile dị na United States nwere ọtụtụ ụgbọ tagzi. N’ọdụ ụgbọelu, ọ na-adịkarị mfe iji tagzi n’ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-akpọrọ ndị njem gaa n’etiti obodo, ma na nke ọzọ ọ na-adịtụ mgbagwoju anya na ọ naghị adịkarị mfe ịchọta nke nwere onwe ya.
N’adịghị ka ihe ọtụtụ mmadụ na-ekwenye na, tagzi na New York adịghị oke ọnụ. Ọnụ ego nke njem njem site na Manhattan bụ ihe dị ka $ 10 mana ọ bụrụ na ị nọ ọsọ ọsọ, ana m akwado ka ị chọọ ụzọ ndị ọzọ dị ka ụzọ ụgbọ oloko n'ihi na okporo ụzọ na Manhattan nwere ike ịbụ ntakịrị ọgba aghara na mgbochi okporo ụzọ na-etolite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ationgbọ njem na United States